Iindawo ezi-3 zokufumana iiDigri eziDibeneyo eziSimahla kwi-Intanethi 2022
Iindawo ezi-3 zokufumana iiDigri zoDibaniso eziSimahla kwi-Intanethi
Nantsi indlela kwaye phi ukufumana iidigri zasimahla kwi-Intanethi eziza kunceda ukuqhubela phambili nomsebenzi wakho. Ezi nkqubo zesidanga simahla, zinikezelwa ziiyunivesithi ezaziwayo zamanye amazwe kwi-Intanethi kwaye zinokunceda abafundi naphi na kwihlabathi liphela.
Zihambile iintsuku apho unokufumana kuphela isidanga osikhethileyo ngendlela yesiqhelo yokuba uye kwiiklasi ezingaxhunyiwe kwi-intanethi. Ngoku, ngoncedo lwethekhnoloji yedijithali, unokufumana ngokusisiseko zonke iintlobo zeedigri ezikwi-Intanethi, ukuqala kwizidanga ezihambelanayo ukuya kuthi ga kwinqanaba eliphezulu lobugqirha.
Abanye abantu abakhethekileyo bakwazile ukusebenzisa izibonelelo zeendaba, itekhnoloji ye-audiovisual kwaye bayidibanisa kwinkqubo yemfundo, yiyo loo nto kunye nekhompyuter kunye noqhagamshelo oluzinzileyo lwe-intanethi ungafumana imfundo epheleleyo kuwo nawuphi na umgangatho wokukhetha kwakho, kwi-intanethi ngokupheleleyo!
Malunga neMigangatho yokuDibanisa yasimahla kwi-Intanethi
Yintoni isidanga sokudibana?
Ngaba ungasifumana isidanga sokudibana kwi-Intanethi?
Ngaba idigri enxulumene nayo ibalulekile?
Iindidi zeeDigri zokudibanisa
Sesiphi isidanga sokudibanisa esona silungileyo?
Ithatha ixesha elingakanani inkqubo enxulumene nesidanga?
Iindawo zokufumana iiDigri zokuNxibelelana simahla kwi-Intanethi
Ukufunda kwi-Intanethi yinto eza kuhlala ihleli. Unokufumana i-bachelor eyamkelweyo, umlingane, i-masters, okanye isatifikethi sobugqirha kwi-intanethi ngokuthatha le nkqubo nokuba yeyiphi na indawo ekwi-Intanethi eyenziwe yiyunivesithi oyikhethileyo okanye ngayo nayiphi na amaqonga okufunda akwi-intanethi Ngaphandle kwaye isatifikethi sakho siya kuba semthethweni kwaye samkelwe njengesiqhelo.
Esi sesinye sezimanga ezininzi zesifundo se-Intanethi, isenzo sinezinye izibonelelo / izibonelelo ezikhoyo, kodwa ezingaphelelanga kwezi zilandelayo;
Ukufunda kwi-Intanethi kulunge kakhulu, unokufunda kuyo nayiphi na imeko ekulungeleyo ukusuka ebhedini yakho nakwisingqengqelo ukuya emotweni naseofisini.
Ukufunda kwi-Intanethi akuyiphazamisi ngokupheleleyo imisebenzi yakho yesiqhelo osaya kuyo kwiiklasi zakho zeyoga, uqhubeke neklabhu yencwadi, amashishini, okanye umsebenzi, kwaye usaqhubeka nesidanga kwi-intanethi.
Ngokungafaniyo nesikolo esiqhelekileyo apho uhlawula khona iifizi ezinkulu zokufunda ngedigri yakho, iiklasi ezikwi-Intanethi azibizi kwaye kwiimeko ezininzi, kukho ezasimahla nazo.
Iidigri ezikwi-Intanethi ziyakhawuleza ukugqitywa kwaye endaweni yokuthwala iincwadi zezifundo ezibonakalayo ngeenxa zonke, usebenzisa iifayile ze-pdf endaweni yoko.
Ukufunda nge-Intanethi kusebenzisa ngokupheleleyo izibonelelo kunye nezibonelelo ezilungiselelwe ubuchwephesha bemithombo yeendaba ukuze ke ukonwabele amava okufunda anamhlanje.
Ezi zibonelelo kufuneka zikwenze uqwalasele ukulandela naliphi na inqanaba lokukhetha kwi-Intanethi.
Esona sizathu siphambili sokwenza eli nqaku kukubonelela ngolwazi oluqinileyo ngeendawo zokufumana izidanga zasimahla kwi-Intanethi, kwaye ngeendawo, oko kuthetha ukuba amaqonga okufunda kwi-Intanethi okanye amaziko, njengekholeji okanye iyunivesithi, ebonelela ngenkqubo yesidanga yokunxulumana nesimahla.
Kukho amaqonga ohlukeneyo okufunda kwi-Intanethi asetyenziswa ziiyunivesithi kunye neekholeji ukusasaza ulwazi okanye ukufundisa abantu abanomdla ngelixa amanye amaziko eneendawo zawo ezizodwa, zangaphakathi, nokuba yeyiphi na indlela eziswa ngayo kwi-intanethi kwaye nawe uyayithatha, emva kwayo yonke loo nto, isimahla .
Isidanga sokudibana luhlobo lwesidanga esingafikiyo kwingxoxo, isidanga, iinkosi kunye nezidanga zobugqirha zezona ziqhelekileyo kwaye andikubeki tyala ngokungazi ukuba kuthetha ntoni.
Ewe, ngokwe-Wikipedia, isidanga esidibeneyo sisidanga sokuqala enikwa emva kwekhosi yesifundo sasemva kwesekondari esihlala iminyaka emibini okanye emithathu. Inqanaba lokufumana umgangatho phakathi kwediploma yamabanga aphakamileyo okanye i-GED kunye nesidanga se-bachelor, esenziwe emva kokugqiba iikhosi ezingamashumi amabini okanye iikhredithi zezifundo ezingamashumi amathandathu.
Isidanga sokudibana linqanaba elithandwayo lesiqinisekiso esisetyenzisiweyo e-UK, e-US nakwamanye amazwe, abantu abanesidanga sokudibana nabo bayabonwa kwaye baqeshwe kwimibutho ephezulu, nawe unokufumana isidanga sokudibana, qhubeka ulandela eli nqaku.
Iidigri zokudibanisa kunokwenzeka ukuba ufumane i-intanethi, amanye amaziko andisa iinkonzo kwi-intanethi ukuze ahlangane neemfuno zabo nabaphi na abantu abanomdla. Iidigri zokudibana kwi-Intanethi zinikezelwa kwiikholeji zasekuhlaleni nakwiziko leminyaka emine ngokufanayo.
Idigri enxulumene nayo inika umfundi isiqalo esomeleleyo kwicandelo elithile lokufunda kunye nolwazi oluthile lomxholo oludingayo kwaye luya kukunika umsebenzi oza kukunceda uqonde ngcono izinto ezinje ngolawulo lwexesha, izakhono zentlalo, njl. iseti yezakhono zibaluleke kakhulu kubaqeshi.
Okunye ukubaluleka / izibonelelo zenqanaba lokudibana, kodwa kungaphelelanga koku kulandelayo;
Iinkqubo zokudibanisa ziyindleko
Kuyakhawuleza ukugqibezela ngenxa yoko unokuthweswa isidanga ngokukhawuleza kwaye ujolise ekufumaneni izakhono ezingaphezulu
Ngedigri enxulumene nayo, unokuqeshwa kwaye uqale ukwenza imali
Isidanga silungiselela owona msebenzi
Kukho iindidi ezine zeedigri zokudibanisa, zezi;
Umdibaniso woBugcisa (AA)
Umdibaniso weSayensi (AS)
Umdibaniso woBugcisa obuSetyenzisiweyo (AAA)
Umdibaniso weSayensi eSetyenzisiweyo (i-AAS)
Ezi kuphela kweendidi ezine zeedigri zokudibana.
Ezona ndidi zibalaseleyo zesidanga sokudityaniswa sisekwe ekubeni ungawufumana ngokukhawuleza kangakanani umsebenzi xa ugqibezela isidanga kwaye uhlawula kangakanani umsebenzi, apha ngezantsi ndiza kunika awona manqanaba aphezulu ahambelana nawo ukuze akuncede xa ukhetha i Inkqubo kufuneka uyisebenzise.
Iingcali zeNyukliya yezoNyango
Abalawuli bezithuthi zomoya
Iingcali zeNkxaso yeNethiwekhi yeKhompyutha
Amagcisa obuNjineli boShishino
Abaphathi beenkonzo zomngcwabo
Ukuncediswa kwezeMpilo yaseKhaya
Iingcali zeGeological kunye nePetroleum
Kuya kufuneka uthathele ingqalelo ukufumana isidanga sokudibana nayo nayiphi na inkqubo enxulumene nayo apha ngasentla njengoko uninzi lwabo lufuna abanini bezidanga kwesi sikhundla kwaye ikwangowona msebenzi uhlawulelwayo.
Inkqubo yesidanga sokudibana ithatha iminyaka emibini yokufunda ngokusisigxina ukuyigqiba.
Imibuzo kunye neempendulo ezilapha ngasentla kukukunceda ucacise ngakumbi malunga nenkqubo yedigri enxulumene nayo nokuba uyayifuna okanye awuyidingi.
Ngaphandle kwendlela, ixesha layo eliphakamileyo ndadwelisa indawo abafundi abanomdla abanokufumana isidanga sokudibana kwi-Intanethi simahla.
Ngokungafaniyo nesidanga, iinkosi kunye nezidanga zobugqirha, isidanga sokudibana asiqhelekanga kwaye ke sinikezelwa ngamaziko ambalwa kwaye ayisiyi-intanethi kuphela kodwa ngaphandle kweintanethi nayo kodwa ayindimisanga ekuqhubeni uphando olunzulu ukufumana iindawo esele zikho zokufumana simahla kwi-Intanethi izidanga ezinxulumene nazo.
KwiKholeji yoLuntu yaseMpuma yeGate (EGCC)
#1 KwiYunivesithi yabantu
IYunivesithi yaBantu, ekwabizwa ngokuba yi-UofPeople, yiyunivesithi yasimahla ekwi-intanethi kwaye ibonelela ngeenkqubo zokunxibelelana zasimahla kwi-Intanethi kuLawulo lweShishini, kwiNzululwazi yeKhompyuter, nakwiNzululwazi yezeMpilo eya kuthi ikuncede ushukumisele iinjongo zakho zobungcali.
Ngokusetyenziswa ngokufanelekileyo kwe-intanethi kunye netekhnoloji ye-audiovisual, i-UofPeople isungulwe kakuhle ngudumo lwehlabathi, ibonelela ngeenkqubo zokunxibelelana ezisemgangathweni kwi-intanethi kwaye iza simahla nangaphandle kokuba abafaki zicelo kuya kufuneka bahlawule imali yokufunda eyi- $ 60.
Isicelo senkqubo yesidanga sokudibana kwiDyunivesithi yaBantu silula kwaye ke yimfuneko, kufuneka kuphela ube nediploma yamabanga aphakamileyo okanye elinganayo.
#2 IYunivesithi ye-IICSE
Eyilelwe ukubonelela ngemfundo esemgangathweni kubantu kwihlabathi liphela ngeenkqubo zayo ezahlukeneyo ezikwi-Intanethi, iYunivesithi yase-IICSE liziko elingenazifundo kwi-Intanethi elinikezela ngeendlela ezahlukeneyo zokufunda kwi-Intanethi nakwimigangatho yokuthatha ikhondo lakho lomsebenzi uye kwinqanaba elilandelayo.
IYunivesithi ye-IICSE ibonelela ngeenkqubo zesidanga zasimahla kwi-intanethi kwizifundo ezahlukeneyo ezinje, kodwa zingaphelelanga kwezi zilandelayo;
Umdibaniso woBugcisa kubuDlelwane bamanye amazwe
Umdibaniso weTekhnoloji yoLwazi lweNzululwazi
Umanyano weSayensi kwiNtengiso
Umdibaniso weSayensi kwi-Nursing
Umdibaniso woBugcisa kwiTheology
Umdibaniso weSayensi kwiPsychology
Umdibaniso weSayensi kwi-Economics
Umdibaniso weSayensi kwiNzululwazi yeKhompyuter
Umdibaniso weSayensi kwiFizikiki yeFizikiki
Umdibaniso weSayensi kunxibelelwano lweMisa kunye neJenali
Umdibaniso weMfundo kunye nezinye ezininzi.
Abafakizicelo abanomdla abanediploma yamabanga aphakamileyo banokufaka isicelo kuyo nayiphi na inkqubo yeedigri ezinxulumene neYunivesithi yaseIICSE ngentlawulo yesicelo se- $ 45 okanye efanayo.
#3 KwiKholeji yoLuntu yaseMpuma yeGate (EGCC)
Eliziko liyikholeji yasekuhlaleni eyaziwayo esebenzisana noMbutho wezeMfundo eMichigan (MEA) ukubonelela ngemfundo yasimahla kwi-Intanethi kubo bonke abantu abanomdla.
I-EGCC ibonelela ngeenkqubo ezahlukeneyo zesidanga kwi-Intanethi kubandakanya izidanga zasimahla kwi-Intanethi ezinokuthi wena, amalungu osapho kunye nabahlobo bangazibandakanya nazo ngaphandle kwendleko.
I-EGCC ibonelela kuphela ngokudibana kweenkqubo zesidanga sobugcisa ezinje ngesayikholoji, intlalontle, isiNgesi, unxibelelwano, imbali, ubugcisa obuhle, kunye nolunye uqeqesho olunxulumene nobugcisa.
Zonke iinkqubo zikwi-Intanethi, ziyabhetyebhetye, kwaye zizenzekelayo ngaphandle kwendleko. Ngokuqinisekileyo oku kunokukunceda ukuba ugcine imali eninzi kwaye ufumane isatifikethi esaziwayo.
Oku kusizisa esiphelweni seli nqaku kwiindawo onokufumana izidanga zasimahla kwi-Intanethi. Isidanga sokudityaniswa asilulohlobo oluqhelekileyo lwesidanga kwaye ke, ayibonelelwa ngamaziko amaninzi ngaphandle kweintanethi nakwi-Intanethi nokuba simahla okanye sihlawulwe, kodwa ungazisebenzisa ezi zinto zidweliswe apha.
Idigri enxulumene nayo yenzelwe ukukunika izakhono ezisebenzayo kwicandelo elithile emva koko unokuqhubeka nesidanga se-bachelor seminyaka emibini, nangona isatifikethi sokudibana sisakulungile ngokwaneleyo ukuze ufumane umsebenzi ohlawula kakuhle okanye unyuselwe kwindawo osebenza kuyo.
Ezi izidanga zasimahla kwi-intanethi ziza nazo zonke izibonelelo ngakumbi ukonga amawaka eedola kwisikolo esiqhelekileyo esiya kukuhlawulisa ngenqanaba elifanayo kwaye ufumane ukonwabela intuthuzelo yokufunda kwi-Intanethi.
Ukugqitywa kwenkqubo yesidanga sokudibana nakweyiphi na kwezi zikolo zidweliswe apha ngasentla, uya kufumana isatifikethi njengobungqina bokuba uyigqibile kwaye uyipakile inkqubo yesidanga. Ungasisebenzisa isatifikethi ukubhalisela inkqubo ye-bachelor degree apho uza kufunda khona kwaye uphumelele ukuze ufumane isidanga se-bachelor kwiminyaka emibini nje kuphela.
Ngesatifikethi sokudibana, ungafumana isidanga sokuqala ekufanele ukuba sikuthathe iminyaka emi-4 ukuyigqiba kwiminyaka emibini nje kuphela.
Kuba inkqubo yedigri enxulumene nayo ikwi-Intanethi, iya kuza nokuphazamiseka okunokuthi kukuthabathe kude nezifundo zakho kodwa ngokuzimisela, uya kuba nakho ukukala kwaye ufumane isidanga sakho kwinqaku elonelisayo.
Ezona zifundo zibalaseleyo kwi-Intanethi kuLawulo lweProjekthi
I-4 yeDigital Master's Degree ekwi-Intanethi eneZatifikethi
Amanqanaba aDibeneyo asimahla kwi-IntanethiAmanqanaba eDlelane
Post Previous:Iiyunivesithi eziphezulu ze-10 zamkela i-IELTS Amanqaku 6 eCanada nase-Australia
Okulandelayo Post:Iiyunivesithi ezingabizi kakhulu zaBafundi beZizwe ngeZwe kunye nendlela yokufaka isicelo
Pingback: Izikolo ezi-6 eziDibeneyo zokuDibana kwabahlengikazi eHouston TX 2021
KwiYunivesithi yabantu uthi:
February 8, 2021 kwi 11: 57 am
Enkosi ngokusikhankanya njengeyunivesithi apho unokufumana isidanga sodibaniso sasimahla. Ngolwazi oluthe kratya malunga neenkqubo zethu zesidanga, ndwendwela iwebhusayithi yethu: http://www.uopeople.edu/programs/. Asinasifundo kodwa asisimahla. Siyazingca ngokuba sikwazile ukunciphisa phantse zonke iindleko zemfundo ephakamileyo. Yonke into esiyicelayo yimali encinci yokuqhubekeka ukuze ihlale izinzile, kwaye kwabo bangenako ukuyifumana, sibonelela ngezifundo kunye nezibonelelo. Siza kuhlala singafundanga, nto leyo ethetha ukuba abafundi abasokuze bahlawuliswe ngemfundo yabo, ngezifundo zekhosi okanye ubhaliso lonyaka.
NgoSeptemba 28, 2021 kwi-7: 48 pm